ဝါးခယ်မ : ကျားပေါက်တို.ရဲ. အာဆီယံ ဂီတပွဲ အတွေ.အကြုံ
ပွဲစဉ်ရဲ့ ၅ဝိုင်းမြောက်လောက် မှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တBSP အဖွဲ့အနေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့ ရှိခဲ့တယ်လို့ ကျားပေါက်က ပြောပါတယ်။ “ပွဲက၂နာရီလောက်မှာစမယ်။ ကျွန်တော်တို့ က နောက်ဆုံးBand ရဲ့ ရှေ့မှာတက်မယ်။ ရှေ့မှာလည်း ဝိုင်းတွေက အရမ်းကောင်းပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း အရမ်းအားပေး နေတော့ ကိုယ်တွေ အလှည့်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့။ ပြီးတော့ ရှေ့မှာBand တွေက သီချင်းပုဒ်ရေ လျှော့ဆို သွားတော့ အချိန်နည်းနည်းဟတဲ့ အချိန်ကိုDJ ခဏလော က်ဝင်လိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တက်ခါနီး မှာ နည်းနည်းပြန်စောင့်လိုက်ရသေးတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ စတက်တော့ မတီးရသေးဘူး။ ဂစ် တာအသံတွေ ထုတ်နေတုန်းရှိသေးတယ်။
Post by kk win @ Thit Htoo Lwin
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန် အာဆီယံ ဂီတပွဲသွားမယ်. ဟန်ထူးလွင်
Posted by အဇ္ဇုန at 11:33 AM